People Media Voice
Network Media Group Rebound 88
Myanmar Online News Reader
Augn San Suu Kyi
Burma Campaign Australia
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ရရှိခဲ့ ပြီးသောနိုင်ငံတကာ ဆုတံဆိပ်များ
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း
၁၉၃၀ တဝိုက် မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေးသမိုင်း
A History of the Burma Socialist Party by Kyaw Zaw Win
Myanmar Ebooks (1)
Myanmar Ebooks (2)
Revolution to Junta
Serene Ebook Corner
နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ် သွားချင်ရင်
Education for Myanmar Youths
( ပညာသင်ဆုတွေ လျှောက်ချင်ရင် )
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓ သာသနာ ပြန့်ပွားရေး
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်နှင့် ဘုရားရှိခိုး
ဦးကိုကိုကြီးနှင့် ဗွီအိုအေ အင်တာဗျူး မဇ္ဈိမအလင်း ပညာဒါန အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်လွဲ၍ ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း စစ်ပွဲတွေရပ် (မင်းကိုနိုင်) မြစ်ဆုံဧ။်ကျေးဇူး ပဲ့တင်သံ မိတ်ဆုံစားပွဲက ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်ဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးတင်စကား။ ဈေးချို နှုတ်ဆက်စကား ကိုမင်းကိုနိုင် (မန္တလေး) ၈၈ ကျောင်းသားများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ရှမ်းပြည်နယ်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်း TNLA နဲ့ အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက် TNLA အမျိုးသမီးစစ်သည် ၆ ဦးကို တပ်မတော်က ဖမ်းဆီ...
ရှမျးပွညျတပျမတျော မွောကျပိုငျး SSPP/SSA ဒုက်ကဌနဲ့ ဘီဘီစီ သီးသနျ့အငျတာဗြူး
၆ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ နေပြည်တော်က ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ မနေ့ကပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ သဘောတူညီချက် ၁၄ချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မှုရှိတဲ့ညီလာခံ...
There may be lots of new exercise machines nowadays but one that remains highly useful and beneficial through the years is the treadmill. It’samachine th...
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးမော့အောင် ဂျပန်အစွမ်းကုန် ကူညီမည်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုရအောင် အကူအညီပေးနိုင်တာအားလုံး အစွမ်းကုန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးက ဒီကနေ့ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ခရီးစဉ်ပထမနေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့အနီးက ဧက ၆၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းနဲ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုတဲ့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေ အတော်များများ အဆင်သင့်ရှိနေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးတာကြောင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ စိုးရိမ်နေကြသေးတယ် လို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ၃ ရက်ကြာ ခရီးရောက်ရှိနေတဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနဲ့ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်ရုံးမှာ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ-ဂျပန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောခဲ့တာပါ။ ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ ပြောကြားချက်ကို စကားပြန်က အခုလို ပြောပါတယ်။
"ဂျပန်အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနေပါတယ်။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ ၁၀၀ လောက်ရှိနေပါတယ်။ တချို့က ၀င်ရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံကြပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် အတော်များများ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းနေတာကြောင့် စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေကြသေးတယ်" လို့ စကားပြန် အမျိုးသမီးက ပြောသွားတာပါ။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြေဈေးကြီးမြင့်လွန်းတာအပြင် စက်မှုဇုန်တွေ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ မြေရှားပါးနေတာတွေကိုလည်း ထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
တပြိုင်နက်တည်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေကို အားပေးကူညီသွားမှာဖြစ်ပြီး မနက်ဖြန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကူညီနိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ ကူညီသွားဖို့ ကမ်းလှမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက အာဇာနည်ဗိမာန်ကို သွားရောက်ဂါရ၀ပြုခဲ့သလို ရန်ကုန်မြို့က ဂျပန်စစ်သချိုင်းနဲ့ သီလ၀ါစက်မှုဇုန်တို့ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:07 PM
■ Recognition of Burma's Proliferation
■ Plagiarism in the Burma Nuclear SCOOP
■ Nuclear Proliferation and Burma the Hidden Connection
■ Images of Suspected Uranium Mine and Refinery in Burma
■ Burma's Secret Agreement With North Korea
■ WMD Nexus Between North Korea and Burma
■ Where's the State Dept Nuclear Report on Burma
■ BURMA DIGEST Interview on Burma Nuclear
■ Analysis of Burma's Nuclear Program 1
■ Analysis of Burma's Nuclear Program 2
■ Russia Burma Nuclear Intelligence Report-1
■ Russia Burma Nuclear Intelligence Report-2
■ Arm-Including Nuke Dealing With N-Korea
■ Burma and Nuclear Proliferation: Policies and perceptions (Andrew Selth)
■ Time foraclose look at Burma's nuclear programme
■ Burma's nuclear bomb alive and ticking
■ Report reveals Burma's 2014 nukes target
■ THE HISTORY OF BURMA'S NUCLEAR AMBITIONS
■ Asean-Burma (Myanmar): Way Forward By Kavi Chongkittavorn
■ Even Paranoids Have Enemies By Andrew Selth
■ Burma’s Armed Forces: Looking Down the Barrel By Andrew Selth
■ Burma's China Connection and the India Ocean Region By Andrew Selth
■ The Time for Change By Martin Smith
■ Burma's Cease fires at Risk By Tom Kramer
■ NEITHER WAR NOR PEACE The Future of cease-fire Agreements in Burma
■ Between Isolation and Internationalization The state Burma
■ Burma's Armed Forces Preparing For The 21st Century
■ China's Real Politik Engagement with Myanmar
■ Sino Japanese Relations
■ Splits emerge in Burma
■ A Historical Overview of Political Transition in Myanmar Since 1988
■ Sino-Myanmar Economic Relations Since 1988
■ The Road to Naypyidaw- Making Sense of the Myanmar Government's Decision to Move its Capital
■ Southern Thai Politics - A Preliminary Overview
■ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ
■ သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်နှင့် စစ်အာဏာ ရှင် စနစ်ကို ဆန့်ကျင် သူများ
■ Children of the revolution
■ On track for trans-Asian rail expansion
■ THE REVOLUTION IN MILITARY AFFAIRS AND CONFLICT SHORT OF WAR 1994
■ ရန်သူနှင့် စကားပြောခြင်း
■ ယမမင်းဥယျာဉ်သို့ အလည်ရောက်ခြင်း
■ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် အိန္ဒိယ သမတ ဒေါက်တာအေပီဂျေ အဗ္ဗဒူလ်ကလမ် တို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချက် မှတ်တမ်း
■ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး၏ ရုရှား နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံချက် မှတ်တမ်းများ
■ ရုရှားနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌါနမှ ကြည်းတပ် ဒုဦးစီးချုပ် Lt. General Evnevich Valery G ဦးဆောင်သော အဖွဲ့မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးအား လာက်ရောက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးချက် မှတ်တမ်းများ
■ ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတို့တွင် (၂၀၀၈)ခု နိုဝင်ဘာ၂၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့အထိ လေ့လာခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း ဦးဆောင်သည့် အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ
■ အီရန်နိုင်ငံ တီဟီရန်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့သော (၁၅) ကြိမ်မြောက် ဘက်မလိုက် လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့၏ ဝန်ကြီးများ အစည်း အဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ
■ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းအား အမေရိကန် သံရုံး ယာယီ တာဝန်ခံ Mr. Larry Dinger လာက်ရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ချက် မှတ်တမ်းများ
■ ၂၀၀၇ တတိယလေးလပတ် ပြည်တွင်း တင်ပြ ချက်များ
■ Chinese and Burmese Prime Ministers Meeting Report
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်သို့ ဂျွန်ဝီလျံ ယက်တော ၀င်ရောက်သည့် ကိစ္စ
■ ၂၀၀၉ မတ်လ တော်လှန်ရေးနေ့ အထူးအစီ အစဉ်
■ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်ပြောပြတဲ့ နအဖ အတွင်းရေး
■ တပ်မတော်ဟာ အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ အရေးကြီးလား
■ နအဖရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှု
VOA နှင့် အင်တာဗျုး
■ ၈၈ ကာလ စစ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဖတ်ရန်
■ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့  ၀ါဒဖြန့်နည်း အသံဖိုင်
■ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ ဒီပဲယင်း အကြမ်း ဖက်မှု အကြောင်း
■ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ
■ ဇွန်လ အစီရင် ခံစာ
■ သြဂုတ်လ အစီရင် ခံစာ ဖတ်ရန်
■ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ ရွှေမန်းသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
■ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ကြံမှု ဖတ်ရန်
■ (၆၄) ကြိမ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ သဝဏ်လွှာ ဖတ်ရန်
■ ဦးကျော်တင့်ဆွေသို့ ပေးစာ ဖတ်ရန်
မြန်မာ HIV သတင်း အချက်အလက်များ
Videos Spoety All
မတ်လ ၁၀ ရက် (မော်လမြိုင်မြို့) မတ်လ ၆ ရက် (တောင်ငူမြို့) မတ်လ ၆ ရက် (နေပြည်တော်ခရီး) ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့ မတ်လ ၁ ရက် (ရှမ်းပြည်နယ်ခရီး) မတ်လ ၁ ရက် (အောင်ပန်း ရှမ်းပြည်နယ်) မတ်လ ၃ ရက် (အောင်ပင်လယ်ကွင်း)(မန္တလေးခရီး) မတ်လ ၃ ရက် (မန္တလေးခရီး) မတ်လ ၄ ရက် (စစ်ကိုင်းခရီး) ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက် (ဖျာပုံ) ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် (သုံးခွ ရန်ကုန်တိုင်း) ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက် (၁)(မြစ်ကြီးနား) ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက် (၂)(မြစ်ကြီးနား) ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက် (ပုသိမ်မြို့) ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက် (ထားဝယ်ခရီး) ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက် (ထားဝယ်ခရီး ၂)
▼ 05/26 - 06/02 (75)
မန်တုံမြို့နယ်မှ ရဲဝန်ထမ်းသုံးဦး လုပ်ကြံခံရ
ပျော်ဘွယ်တွင် မိုးမရွာ၍ ရပ်ကွက်အချို့ သောက်ရေပြတ်လ...
ဘာသာရေးအကြောင်းပြ အကြမ်းဖက်မှုများကို ဆန့်ကျင်ကြပါစ...
ပို့ဘလဲကို မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်များ အခြေစိုက်စခန်းလု...
အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို စစ်ခေါင်းဆောင်များ သီးခြားတွေ...
အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသူ အလုပ်သမားနှစ်ဦး ဆေးရုံတင်ရ
ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကျန်းမားရေးစောင်...
ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ရေး ဆွေးနွေး ပွဲများ စစ်တွေနဲ့ ကေ...
ဘော့စ်နီးယား-ခရိုအက်ခေါင်းဆောင် ၆ ဦးကို ပြစ်ဒဏ်ချ...
ကလေးဦးရေ ကန့်သတ်မှု ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ရှင်းလင်းခ...
သားသမီးကန့်သတ်မှု ဒေသန္တရအမိန့် မြန်မာအစိုးရ ပြန်သုံ...
ဧ၀ရက်တောင်ထိပ်ကို တက်ရောက်အောင်မြင်ခြင်း နှစ် ၆၀ြ...
မြန်မာ့ဆန် ဥရောပတွင် ဈေးကွက် ဆက်ချဲ့
လားရှိုးပဋိပက္ခ မူဆယ်သို့ကူးစက်မည်ကို ဒေသခံများ စိုး...
လားရှိုး မွတ်စလင်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ မီးရ...
နိုင်ငံတကာရှေ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲမည်ဟု ကချင် ပြော
အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှု ခရီး စတင်ခြင်း
ဖယ်ရှားခံ အရာထမ်းများ နေရာတွင် လူသစ်များ အစားထိုးခ...
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အိမ်ရာကွက်သစ် ဖော်ထုတ်သူ ၁ဝ ဦး ထော...
ဟိုတယ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် အင်းလေးက...
ဇေကမ္ဘာ ဒေါက်တာခင်ရွှေကို လိမ်လည်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ အမှု...
အုပ်စု နှစ်စု ပြိုင်ဆွဲသည့် ဘူးသီးတောင် လေလံပွဲ ပြ...
ကရင်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တွင် ယခုနှစ် သွေးလွန်တုတ်ကွေး...
ခလုတ်မှန်သမျှ သီချင်း ဖြစ်ပါစေ
အင်တာနက်လုံခြုံရေး သမ္မတ အိုဘားမား တရုတ်နဲ့ ဆွေးနွေ...
တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့မှာ ဆန္ဒပြခွင့်ပိတ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည် ကျန်းမာရေး MSF စိုးရိမ်
ဆီးရီးယားကို ရုရှား ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ် ကူမည်
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပထမနေ့ နှစ်ဘက်အားရ...
ဆူပူမှုကြောင့် လားရှိုးမှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်
"ဝ"ဒေသကို ပြည်နယ်အဆင့် တိုးမြှင့်ပေးဖို့ တောင်းဆို...
မင်းဓမ္မပန်းဆိုင်ခန်းတွေ မပြောင်းရွှေ့ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော...
ရှမ်းပြည်နယ်မှာ လက်နက် ၃၀ ကျော် သိမ်းဆည်းရမိ
ဆန္ဒပြ စက်မှုဇုန်တွေကို သွားရောက်စစ်ဆေးတော့မည်
ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေ အပေါ်ကန့်သတ်မှု ရုတ်သိမ်းဖို့ ...
မြန်မာသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် ပိုတ
အင်းလေး ရေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ဒေသခံများ အရေပြားရောဂ...
သိန်းနီမြို့နယ်တွင် လက်နက်များ သိမ်းဆည်းရမိမှု စုံစ...
မြစ်ဆုံနှင့် ယုဇန စီမံကိန်းများ လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရန်...
မြစ်ကြီးနား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကုလသမဂ္ဂ ကို...
မြောက်ပိုင်း လူသတ်မှု ABSDF ကာယကံရှင်များနှင့် တွေ့...
စစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကချင်၏ အခန်းကဏ္ဍ
မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲအပေါ် မျှော်လင့်ချက်နှင့် အြ...
တရားဝင် ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် ပေါ်ရေး၊ ဒေသခံများ ကြို...
ဂျပန် နိပွန် အကူအညီများကို SSPP က တိုက်ရိုက် လက်ခံ...
ရခိုင်ပါတီနှစ်ခု ပူးပေါင်းဖို့ အဆင့်သင့်လို့ အေအယ်...
ကချင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးအရေး ထည့်သွင...
တန့်ယန်းမြို့နယ် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ လာရင်းနေရပ် ပြ...
အလုပ်ရမယ်ပြောပြီး မရလို့ ပွဲစားကုမ္ပဏီ လျော်ကြေးပြန...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင...
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်းခရိုင် အတွင်း မြန်မာနိုင်...
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဂျပန်က ဒေါ်လာ ၅ဝ၄ သ...
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးမော့အောင် ဂျပန်အစွမ်းကုန် ကူည...
ဆွေးနွေးပွဲအကြို မြစ်ကြီးနား လုံခြုံရေး
စီးပွားရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ထိုးပွဲ ဂျပန်ဝန်ကြီးခ...
မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂျပန်က ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ကျော် ကူ...
Oklahoma မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ သမ္မတအိုဘားမား သွားရောက်...
ကချင် ဒုက္ခသည် ကလေးများ ကျောင်းဆက်တက်ရန် ခက်ခဲနေ
ထားဝယ် စီမံကိန်း၌ ထိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရင...
မီးရထားနဲ့ ခရီးသွားရာဝယ် …
ALD က ပင်လုံမူ၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုဖြင့် တိုင်းရင်...
မိတ္ထီလာဖြစ်ရပ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးသတ်မှုဖြင့် အရေးယူခ...
အင်းလေလံဈေး မြင့်နေခြင်းကြောင့် ရေလုပ်သားများနှင်...
မော်လမြိုင် အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း တိုးချဲ့ရန်ြေ...
၁၅ နှစ်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း လက်ပံတောင်း တောင်ကြည့်ပွဲ ခွင့်ပြ...
► 05/12 - 05/19 (81)
► 03/31 - 04/07 (91)
► 02/03 - 02/10 (93)
► 01/13 - 01/20 (118)
► 2012 (5368)
► 11/18 - 11/25 (119)
► 10/28 - 11/04 (99)
► 10/07 - 10/14 (144)
► 09/30 - 10/07 (139)
► 09/09 - 09/16 (128)
► 09/02 - 09/09 (145)
► 08/26 - 09/02 (153)
► 08/12 - 08/19 (160)
► 08/05 - 08/12 (165)
► 07/22 - 07/29 (205)
► 07/15 - 07/22 (217)
► 07/08 - 07/15 (139)
► 07/01 - 07/08 (91)
► 05/06 - 05/13 (143)
► 04/29 - 05/06 (131)
► 04/22 - 04/29 (139)
► 04/15 - 04/22 (82)
► 03/18 - 03/25 (129)
► 01/22 - 01/29 (134)
► 01/08 - 01/15 (102)
► 01/01 - 01/08 (104)
► 12/04 - 12/11 (105)
► 11/13 - 11/20 (99)
► 09/25 - 10/02 (90)
► 08/21 - 08/28 (81)
► 07/10 - 07/17 (112)
► 05/01 - 05/08 (95)